Goolkii Radamel Falcao oo loo doortay kii usbuuca ee Champions League…. (Yaa la tartamayay?) – Gool FM
Haaruun Yuusuf March 6, 2017
Xiddiga xulka qaranka Colombia ayaa goolkiisa waxaa la tartamayey goolkii uu Casemiro ka dhaliyey kulankii ay kooxdiisa Real Madrid 3-1 ku garaaday Napoli.
Sidoo kale kulankaas Lorenzo Insigne ayaa gool cajiib ah daba mariyey goolhaye Keylor Navas, kaasoo isna tartanka goolka usbuuca ee Champions League qeyb ka ahaa.
Angel Di Maria goolkiisii uu ka soo tuuray bannaanka xerada ganaaxa kulankii ay PSG 4-0 ku garaacday kooxda Barcelona ayaa ka mid ah goolasha la tartamayey midka Falcao.
Falcao ayaa sidoo kale tartanka goolka usbuuca ee Champions League ku garaacay midkii xiddiga kooxda Bayern Munich ee Arjen Robben uu ka dhaliyey Arsenal kulankii 5-1 lagu garaacay Gunners ee ka dhacay garoonka Allianz Arena.
DAAWO GOOLKA USBUUCA EE CHAMPIONS LEAGUE:-
"Barcelona sooma kabsan karto kulanka PSG" - Jese Rodriguez
XULKA SERIE A: Waa kuwee 11-ka xiddig ee todobaadkan ugu wanaagsan horyaalka Talyaaniga?